တိုင်းပြည်အတွက်ဘာစကားကြီး စကားကျယ်မှ မပြောကြဘဲ သူတို့တွေ အမှိုက်ကောက်နေကြတယ် - Cele GabarCele Gabar
လစဉ်လတိုင်း တခေါက်လေးတောင်မပျက်ဘဲ ၂၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ( ၂ နှစ်တိတိ ) ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ စည်းကမ်းမဲ့အစွန့်ပစ်အမှိုက်တွေကို အနံ့အသက်ဆိုးတွေကြားထဲ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ လိုက်ကောက်ရင်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာပြည်သူတွေကိုပါ ” အမှိုက်ကောက်တာ ရှက်စရာမဟုတ်… စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာသာရှက်စရာ ” ဆိုတဲ့ Awareness ပေးနေကြတဲ့ လေးစားစရာ လူငယ်လေးတွေ လို့ မောင်မောင်အေး က တင်စားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ လတ်တလောမှာ Clean together Challenge နဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေက ဦးဆောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ဖန်တွေနဲ့အတူ အမှိုက်တွေ ကောက်ရင်း ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဒေသကို သန့်ရှင်းသာယာစေဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးဖမ်းနေကြခြင်းအတွက် မောင်မောင်အေးရဲ့ ဂုဏ်ပြုစကားပဲဖြစ်ပါတယ် ။
တချို့တွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ” အလကား ပေါ်ပင်တွေပါ ” လို့ အိမ်မှာထိုင်ရင်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ စာရိုက်တင်နေတဲ့အချိန် …. သူတို့တွေက အမှိုက်ကောက်နေကြတယ် ၊ တချို့တွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ” ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ဖို့ ဟန်ပြလုပ်နေတာပါကွာ ” လို့ အိမ်မှာထိုင်ရင်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ စာရိုက်တင်နေတဲ့အချိန် သူတို့တွေက အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်. ၊ တချို့တွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ” နာမည်လိုချင်လို့ ဖောရှောရို က်နေတာပါကွာ ” လို့ အိမ်မှာထိုင်ရင်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ စာရိုက်တင်နေတဲ့အချိန် …. သူတို့တွေက အမှိုက်ကောက်နေကြတယ် ၊ တချို့တွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ” အပိုအလုပ်တွေ.. သိပ်ကောက်ချင်ရင် ငါ့အိမ်ရှေ့လာကောက်ကြ ” လို့ အိမ်မှာထိုင်ရင်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ စာရိုက်တင်နေတဲ့အချိန် …. သူတို့တွေက အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်….
ဘာနာမည်မှ မလိုဘဲ…သူတို့တွေ အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်… ဘာအကျိုးရလိုမှုမှ မပါဘဲ … သူတို့တွေ အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်…. တိုင်းပြည်အတွက် ဘာညာ ဘာစကားကြီး စကားကျယ်မှ မပြောကြဘဲ …သူတို့တွေ အမှိုက်ကောက်နေကြတယ်…. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို မောင်မောင်အေးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ရေးသားထားတာ တကယ်ကိုထိမိပြီး အသိတရားရစေပါတယ် ။ CeleGabar ကိုအားပေးနေကြတဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေလည်း ကိုမောင်မောင်အေးရဲ့ စာလေးကို မျှဝေရေင်း တတပ်တအား ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော် ။
Source : Mg Mg Aye
တိုငျးပွညျအတှကျဘာစကားကွီး စကားကယျြမှ မပွောကွဘဲ သူတို့တှေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ
လစဉျလတိုငျး တခေါကျလေးတောငျမပကျြဘဲ ၂၄ ကွိမျတိုငျတိုငျ ( ၂ နှဈတိတိ ) ရနျကုနျမွို့အနှံ့ စညျးကမျးမဲ့အစှနျ့ပဈအမှိုကျတှကေို အနံ့အသကျဆိုးတှကွေားထဲ ခြှေးတလုံးလုံးနဲ့ လိုကျကောကျရငျး ဖွတျသှားဖွတျလာပွညျသူတှကေိုပါ ” အမှိုကျကောကျတာ ရှကျစရာမဟုတျ… စညျးကမျးမဲ့ အမှိုကျပဈတာသာရှကျစရာ ” ဆိုတဲ့ Awareness ပေးနကွေတဲ့ လေးစားစရာ လူငယျလေးတှေ လို့ မောငျမောငျအေး က တငျစားလိုကျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ ။ ဒါကတော့ လတျတလောမှာ Clean together Challenge နဲ့အတူ အနုပညာရှငျတှကေ ဦးဆောငျပွီး သူတို့ရဲ့ဖနျတှနေဲ့အတူ အမှိုကျတှေ ကောကျရငျး ကိုယျ့မွို့ ကိုယျ့ဒသေကို သနျ့ရှငျးသာယာစဖေို့ ဝိုငျးဝနျးကွိုးဖမျးနကွေခွငျးအတှကျ မောငျမောငျအေးရဲ့ ဂုဏျပွုစကားပဲဖွဈပါတယျ ။
တခြို့တှကေ အှနျလိုငျးပျေါကနေ ” အလကား ပျေါပငျတှပေါ ” လို့ အိမျမှာထိုငျရငျး လကျခြောငျးလေးနဲ့ စာရိုကျတငျနတေဲ့အခြိနျ …. သူတို့တှကေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ ၊ တခြို့တှကေ အှနျလိုငျးပျေါကနေ” ဓါတျပုံရိုကျတငျဖို့ ဟနျပွလုပျနတောပါကှာ ” လို့ အိမျမှာထိုငျရငျး လကျခြောငျးလေးနဲ့ စာရိုကျတငျနတေဲ့အခြိနျ သူတို့တှကေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ. ၊ တခြို့တှကေ အှနျလိုငျးပျေါကနေ” နာမညျလိုခငျြလို့ ဖောရှောရို ကျနတောပါကှာ ” လို့ အိမျမှာထိုငျရငျး လကျခြောငျးလေးနဲ့ စာရိုကျတငျနတေဲ့အခြိနျ …. သူတို့တှကေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ ၊ တခြို့တှကေ အှနျလိုငျးပျေါကနေ ” အပိုအလုပျတှေ.. သိပျကောကျခငျြရငျ ငါ့အိမျရှလေ့ာကောကျကွ ” လို့ အိမျမှာထိုငျရငျး လကျခြောငျးလေးနဲ့ စာရိုကျတငျနတေဲ့အခြိနျ …. သူတို့တှကေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ…. ဘာနာမညျမှ မလိုဘဲ…သူတို့တှေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ…
ဘာအကြိုးရလိုမှုမှ မပါဘဲ … သူတို့တှေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ…. တိုငျးပွညျအတှကျ ဘာညာ ဘာစကားကွီး စကားကယျြမှ မပွောကွဘဲ …သူတို့တှေ အမှိုကျကောကျနကွေတယျ…. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို မောငျမောငျအေးက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ ရေးသားထားတာ တကယျကိုထိမိပွီး အသိတရားရစပေါတယျ ။ CeleGabar ကိုအားပေးနကွေတဲ့လူငယျပရိသတျတှလေညျး ကိုမောငျမောငျအေးရဲ့ စာလေးကို မြှဝရေငျေး တတပျတအား ဝိုငျးဝနျး ကူညီပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစနေျော ။
Previous Previous post: ဆရာမ မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ဝတ္ထုထဲက ငြိမ်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
Next Next post: ဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ် ခံခဲ့ရတဲ့ ( ၇၄)နှစ်မြောက် နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ့် ကားမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်များ
ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် အခွင့်ထူး တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
Published: December 5, 201812:03 pm
မင်းသမီးတွေကို လက်ကိုင်ရမှာ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
Published: December 17, 201812:51 pm